Andro: 2 Febroary 2020
Minisitry ny Turhan İyidere Examines İkizdere Highway works
Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, izay nandinika ny làlambe Iyidere-Ikizdere, dia nihaona tamina mpivarotra sy olom-pirenena tao amin'ny distrikan'i Ikizdere taorian'ny fihaonana tamin'ny toeram-panamboaran-dàlana mifandraika amin'ireo asa mbola misy. Minisitra nanao fanambaràna tamin’ny mpanao gazety eto [More ...]
Ny bokotra dia harotsaka ho an'ny làlan-kalasan'i Bursa Avaratra!
Fiomanana amin'ny fanovana ny lalana amin'ny ampahany amin'ny tetikasa Istanbul-Bursa-İzmir Highway, izay nentina amin'ny fandaharam-potoana nataon'ny mpisolovava Nurhayat Altaca Kayışoğlu, mpikambana ao amin'ny CHP Bursa mpikambana ao amin'ny parlemanta ary ny Birao an'ny parlemanta. [More ...]
İmamoğlu, Pendik Kaynarca Tuzla Metro fanokafana rahampitso any Pendik
Ekrem İmamoğlu dia ho any amin'ny toerana fananganana Pendik ho fanokafana ny zotra metro Pendik Kaynarca Tuzla. Anarana manan-danja maro no hanatrika ny lanonana amin'ny tolakandro ary hifarana amin'ny 2022 ny fanamboaran-dalana. Istanbul Metropolitan Municipality [More ...]
Mitombo ny fahafahan'ny mpitaky ny mpandeha an'i Kadıköy Moda Tram
Ny kaominina ao Metropolitan Istanbul dia nampitombo ny isan'ny lamasinina ao amin'ny Kadıköy Moda Tram Line. Nandritra ny ora be amin'ny andro, ny mpandeha mitondra fahaiza-manao zotra, izay natolotry ny sarety 3, nitombo efa ho 30 isan-jato. Teo anelanelan'i Kadıköy Moda [More ...]
Tany nihotsaka teo amin'ny làlambe Samsun Ordu
Taorian'ny nitrangan'ny fihotsahan'ny tany tany amin'ny toeran'ny Taşbaşı Mahallesi teo amin'ny lalana amoron-dranomasina Black, ny Kaominin'i Metropolitan dia nanomboka niasa tamim-pahombiazana mba hanokafana ny làlana haingana araka izay azo atao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny ady mahomby amin'ny minitra voalohany tao amin'ilay tranga. Tarika, tany ary [More ...]
Ny fijanonan'ny metro metro Pendik Kaynarca Tuzla dia zaraina amin'ny tranonkala ofisialin'ny Metro Istanbul sy IMM. Ny fijanonana ho an'ny zotra metro izay hanangana miaraka amin'i Alsim Alarko sy Cengiz [More ...]
Androany amin'ny tantara: 2 Febroary 1922 26 ho an'i Ankara tamin'ny volana Desambra
Androany ao amin'ny tantara 2 febroary 1922 26 solombavambahoaka mpiasan'ny varotra Gillespie amerikana, izay tonga tao Ankara tamin'ny volana Desambra, dia nanoratra tany amin'ny departemantan'i Etazonia tamin'ny tatitra, "Ny governemanta nasionalista dia maniry ny hanorina ny fifandraisana ara-barotra amin'i Etazonia ary hitady fanampiana ara-bola. [More ...]